Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 32)
Lagu sifeeyay wejiga hore ee Samsung Galaxy S7
Shirkadda Samsung ee soo socota, Galaxy S7, ayaa la filayaa in la soo bandhigo inta lagu jiro MWC 2016 iyo wararka xanta ugu horreeya ee ku saabsan durba waxay bilaabeen inay soo muuqdaan.
Samsung waxay patent ka heleysaa taleefan casri ah oo isku laaban oo leh borojektar
Shahaadadu waxay muujineysaa sida Samsung uga shaqeyn karo taleefanka gacanta ee laabma oo leh borojektar.
Nooc ka mid ah 'OnePlus X' ayaa soo maray TENAA oo leh 4,99-inch FHD shaashad ah iyo Snapdragon 810
Qalabka Snapdragon 810 waxaan dhihi karnaa waa xiddiggan noocyadan cusub ee OnePlus X ee maanta maray TENAA
LG G3 wuxuu bilaabaa inuu helo Android 6.0 Marshmallow si rasmi ah sida ay xaqiijisay LG Poland
Android 6.0 Marshmallow wuxuu bilaabmayaa in lagu meeleeyo LG G3 ee Poland sida ay ku xaqiijisay soo saaraha laftiisa Facebook-ga rasmiga ah.
LG G5 wuxuu la imaan lahaa shaashad labaad iyo kamarad gadaal leh
LG G5 wuxuu imaan doonaa rubuca hore ee sanadka 2016 wuxuuna yeelan doonaa astaamo lagu arki doono V10 iyo G4 sida shaashadda labaad ee tan koowaad.
Haier Iron Bluetooth, oo ah Bluetooth-ga runta ah ee Smartwatch wax ka yar 40 euro
Maanta waxaan soo bandhigeynaa Haier Iron Bluetooth, oo ah Bluetooth Smartwatch la awoodi karo oo leh dareemayaal garaaca wadnaha isku dhafan.
Qiyaasaha iyo cabirka Galaxy S7 iyo S7 gees waxaa lagu xaqiijiyay daadis cusub
Soo bixiddu waxay ka timid cabirka dhabta ah ee Galaxy S7 iyo S7 gees. Laba taleefan oo lagu soo bandhigi doono Shirka Caalamiga ah ee Mobilka
Dhammaan unugyada Xiaomi Mi Pad 2 waxaa lagu iibiyay hal daqiiqo gudaha Shiinaha
Dhammaan cutubyada Xiaomi Mi Pad 2 waxaa lagu iibiyay wax ka yar daqiiqad markii Xiaomi ay ka dhigtay mid lagu iibsado qadka.
Samsung Pay si loo ballaariyo lacag bixinta khadka tooska ah iyo taleefannada ka jaban sanadka 2016
Samsung ayaa balaarin doonta Samsung Pay si lacagaha internetka looga bixin karo waxayna u keeni doontaa aalado badan sanadka soo socda
Moto 360 Sport ayaa haatan diyaar looga yahay in laga iibsado Spain iyadoo la bixinayo € 289
€ 289 waxaad ku iibsan kartaa Moto 360 Sport smartwatch cusub ee Spain, kaas oo si gaar ah loogu talagalay kuwa sharad ku sameeya ciyaaraha
Xiaomi waxay iibisay in kabadan 10 milyan oo jijimooyin Mi Band ah laga bilaabo Janaayo ilaa Sebtember 2015
Xiaomi waxay u timid inay la wadaagto tirooyinka iibka ee Xiaomi Mi Band seddexdii rubuc ee hore ee 2015 iyadoo la iibiyay 10 milyan
Shirkadda LG ayaa sheegtay in muddo 450.000 maalmood gudahood ah ay ku iibisay dalka Mareykanka 10 oo cutub oo ah LG V45
Dalka Mareykanka, LG wuxuu iibiyey 450.000 oo unug oo ah V10 muddo 45 maalmood gudahood ah. Dhammaan tirooyinka tirada badan ee uu nala wadaagayo.
Xiaomi Mi 5 wuxuu ku sii daayaa jawaabaha saxaafadda iyo fiidiyoowga
Laga soo bilaabo Xiaomi MI 5 waxaan haynaa sawirro dhowr ah oo muujinaya jawaabo saxaafadeed iyo fiidiyow gaaban oo 20-ilbiriqsi ah halkaasoo isticmaale u muuqdo inuu ku ciyaarayo.
Samsung Galaxy J1 cusub ayaa ka muuqata Twitter-ka
Sawirka Samsung Galaxy J1 ee Samsung ayaa ka muuqda Twitter wuxuuna muujinayaa daabacaadda cusub ee 206 ee taleefankan xiisaha leh ee soo galaya.
HTC waxay ku dhawaaqeysaa One X9 oo leh shaashadda 5,5 ″ 1080p, jirka birta ah iyo kamaradda 13MP oo leh OIS
HTC One X9 horeyba rasmi ayuu u ahaa maalintan, Diseembar 24, taas oo soosaaraha Taiwanese uu doonayo inuu ku daro Terminal cusub oo ku yaal gobolka.
Tani waa sawirka ugu horreeya ee dhabta ah ee Xiaomi Mi 5
Laga soo bilaabo Xiaomi Mi 5 waxaan horeyba u haynaa sawirkii ugu horreeyay ee dhabta ah ee ina tusaya qayb ka mid ah nashqadda iyo qaar ka mid ah dhaldhalaal aad u dhuuban.
Dhamaan tilmaamaha LG G5 waa la sifeeyey
Waxaan horeyba u ogaanay wax walba oo ku saabsan LG G5, laakiin qashinkan cusub waxaan ku dhameystiri karnaa waxa noqon doona calankan cusub ee soo saaraha Kuuriya.
Bixin, qeexitaanno iyo qiimaha Xiaomi Mi 5 ayaa muuqda
Waxaan ku laabaneynaa xamuulka xanta cusub ee ku saabsan Xiaomi Mi 5 oo markan la bixinayo, qeexitaannada iyo qiimaha suurtagalka ah ee taleefankan ayaa muuqda.
Sawirro badan oo Samsung Galaxy A9 ah ayaa la muuqda qeexitaannadooda la xaqiijiyay
Samsung Galaxy A9 waxay noqoneysaa mid sii kordheysa oo dhab ah marka la marayo TENNA oo lagu sifeynayo sawirro badan oo taleefannada casriga ah oo leh shaashad 6-inji ah
Huawei waxay horumarinaysaa GPU-yo gaar ah iyo qalab xusuus ah
Huawei waxaa laga yaabaa inay soo saarto khadkeeda gaarka ah ee GPU-yada iyo flash-ka si ay u noqoto soo saare iskiis u shaqeynaya
Meizu wuxuu xaaqaa iibka isagoo kordhinaya 340% marka loo eego sanadkii hore
Meizu wuxuu soo bandhigay natiijooyin maaliyadeed oo aad u qurux badan oo muujinaya koritaanka dhanka iibka ee Meizu soo gaadhay
Xanta ugu horeysa ee ku saabsan LG G5 ayaa timid: dareenka faraha iyo Snapdragon 820 SoC hoostiisa
Xanta ugu horeysa ee ku saabsan LG G5 ayaa durbaba imanaya, LG-da soo socota ee soo socota ee la soo bandhigi doono inta lagu jiro MWC 2016
Xiaomi waxay soo bandhigtay smartwatch-keedii ugu horeeyay taariikhda. Saacaddan casriga ah waxaa loogu talagalay carruurta yaryar ee guriga ku jirta.
Huawei P9 waxaa lagu soo bandhigi karaa bisha Maarso 2016
Mid ka mid ah qalabka soo socda ee soo saaraha Shiinaha, Huawei P9, ayaa la soo bandhigi karaa inta lagu jiro rubuca koowaad ee sanadka soo socda ee 2016.
Xiaomi kuma deg degsana inay soo bandhigto Mi5-ka, in kasta oo ay runti fiican tahay
Maamulaha guud ee shirkada laftiisa ayaa xaqiijiyay in Xiaomi Mi5 uu la imaan doono processor-ka Qualcomm Snapdragon 820.
Dhabar jab cusub oo soo foodsaaray shirkadda HTC: Deutsche Telekom si ay u joojiso iibinta taleefannada shirkadda ee ku xadgudubka rukhsadda
Waxyaabaha HTC magac ma leh. Waxay dejiyeen goob lagu ciyaaro oo ay ku koraan gabbaadka. Soosaaraha Taiwan ayaan marayn xaaladdiisii ​​dhaqaale ee ugu fiicnayd haddana waxa soo gaadhay jug cusub: laga bilaabo 1da Janaayo, 2016, shirkadda HTC ma sii awoodi doonto inay ka iibiso meel kasta terminal shirkadda taleefanka gacanta ee Deutsche Telekom.
Huawei waxay soo bandhigeysaa Huawei Watch oo loogu talagalay haweenka at CES 2016
Huawei waxay soo bandhigi doontaa nooca haweenka ee Huawei Watch ee CES 2016 oo lagu qaban doono Las Vegas jiilkii labaadna horay ayuu horumar ugu jiraa
Gallery cusub oo sawirro ah ayaa muujinaya HTC One X9 oo dhammaan quruxdeeda leh
Waxaan horeyba u ognahay in HTC ay leedahay karti u leh in alaabteeda la arko waqti ka hor iyo HTC One X9 ma noqon doonin mid ka reeban. Haddii aan horeyba kuu soo bandhignay sawirradii ugu horreeyay ee dhabta ahaa shalay, hadda waa wareegga sawir-gacmeed dhan oo si faahfaahsan u muujinaya dhammaan sirta HTC One X9.
Sony waxay soo bandhigi kartaa laba taleefan sanadka soo socda ee 2016
Imaatinka dhow ee CES, oo lagu qaban doono 6-da ilaa 9-ka bisha Janaayo magaalada Las Vegas (Nevada), durdurinta xanta ayaa si aad ah u sii kordheysa. Haddana waa markiisii ​​Sony.
Kala shaandheeyay jadwalka taariikhda ee Android 6.0 M laga bilaabo HTC
liistada ayaa lagu daadiyay dhammaan aaladaha HTC ee loo maleynayo in lagu cusbooneysiinayo Andrid 6.0 Marshmallow.
Xiaomi waa shirkadda iibisa taleefannada casriga ah ee ugu badan Shiinaha
Xiaomi waxay soo ceshatay booska koowaad ee soo saaraha iibiya taleefannada ugu badan suuqa Aasiya. Muddo intee le'eg ayuu kaalinta koowaad jiri doonaa?
OnePlus 2 Mini wuxuu la soo muuqan doonaa shaashad 4,6-inji ah iyo Snapdragon 810 chip
The OnePlus 2 Mini waa waxa soo socda ee sumaddan ah ee ku guuleysatay inay hesho dheelitir ku filan oo lagu bilaabi karo boosteejooyin tayo sare leh qiimo wanaagsan
Sawirro cusub oo HTC One X9 ah ayaa muuqda
HTC One X9 ayaa ka muuqda sawirro muujinaya baarka sare ee dhabarka oo aad ugu eg midka Nexus 6P.
Mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee suurtagalka ah ee Galaxy S7, oo uu ka qaadan doono taleefannada kale, ayaa noqon doona shaashadda cadaadiska xasaasiga ah ee ka dhex jirta sheekoyinnada kale.
Wejiga hore ee Xiaomi Mi5 waa la sifeeyey
Xiaomi Mi5 wuxuu noqday mid ka mid ah aaladaha la filayo sanadka. Dheecaanno cusub ayaa soo ifbaxaya, sida qaybtiisa hore.
HOMTOM HT7 iibka kaliya $ 39,99 cutubyadii ugu horeeyay ee la iibiyo maalin kasta
Maanta waxaan sharaxeynaa sida loo helo dallacaadda si loogu helo HOMTOM HT7 iibka kaliya $ 39,99.
Huawei wuxuu bilaabayaa taleefanka Nexus ee soo socda oo leh Snapdragon 820 chip
Xanta ayaa ka soo baxaysa suurtagalnimada in Huawei ay dib u soo saari doonto taleefan cusub oo Nexus ah sanadka soo socda kaas oo yeelan doona qalabka 'Snapdragon 820 chip'
Elephone M2, falanqaynta iyo khibrada isticmaale
Maanta waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta Elephone M2, oo ah barta dhexe ee bartanka u dhow ee xilligan ugu badan ku eg.
OnePlus 3, rikoodhada ugu horreeya ayaa muuqda
Bixiyeyaasha ugu horreeya ee OnePlus 3 ayaa u muuqda, halkaasoo lagu arko meel aad ula mid ah OnePlus 2, laakiin leh farqi aan caadi ahayn.
Bluboo XTouch, falanqeyn iyo dib u eegis Isbaanish ah
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa dib-u-eegista Isbaanishka ee Bluboo XTouch, oo ah mid xamaasad leh oo loo yaqaan 'Android 5.1' oo leh faahfaahin farsamo oo dhererkeedu yahay dhammaadka sare ee Android
HTC waxay sii wadaa inay hagaajiso iibka, laakiin aad ayey uyartahay
Warbixintii ugu dambeysay ee iibka HTC waxay muujineysaa in shirkaddu ay horumarisay iibkeeda, iyadoo ay ugu wacan tahay soo saarista shirkadda HTC A9
Google ayaa Nexus 6 kala baxday bakhaarkiisa internetka
Google ayaa ugu dambayntii Nexus 6 kala baxday bakhaarkiisa internetka isla markii ay jirtay hal sano waana la soo bandhigay.
Android 6.0 waxay dhowaan imaan doontaa qaar ka mid ah boosteejooyinka Xiaomi
Android 6.0 ama sidoo kale loo yaqaan Marshmallow, wuxuu imaan doonaa qaar ka mid ah boosteejooyinka Xiaomi ee hoos yimaada lakabka qaabeynta MIUI.
Samsung Galaxy Note 5 ayaa imaan kara Yurub bisha Janaayo
Xanta cusubi waxay soo jeedinaysaa in Samsung Galaxy Note 5 uu imaan karo Yurub bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2016 iyadoo lagu qiimeynayo 800 oo Euro
Kani ma sawirkii ugu horreeyay ee dhabta ah ee Xiaomi Mi5?
Sawirkii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Xioami Mi5 waxaa lagu daabacay bogga rasmiga ah ee Xiaomi ee Weibo
5 nooc oo kala duwan oo ah mustaqbalka Xperia Z6 ayaa lagu xamanayaa
Xanta ugu horeysa ee calanka mustaqbalka ee shirkadda Japan ayaa bilaabeysa inay timaado. Wax walba waxay muujinayaan in Xperia Z6 ay lahaan doonto 5 nooc oo kala duwan.
Sony waxay la wareegtay qaybta dareenka sawirka Toshiba $ 115 milyan
Sony waxay kuxirantahay suuqa dareenka sawirka iyadoo la iibsanaayo qaybtan Toshiba loogu talagalay 115 milyan oo doolar.
Smartwatch-ka HTC One ee ka hooseeya Android Wear ayaa imaan lahaa bisha Febraayo
Smarwatch HTC One wuxuu noqon karaa shey cusub oo soosaarahan reer Taiwan ah kaasoo kaa caawin doona inaad ku noqoto maamulkaaga.
Samsung ayaa ku dhawaaqday jiilka labaad ee Galaxy A3, A5 iyo A7
Samsung waxay ku dhawaaqeysaa jiilka labaad ee Galaxy A3, A5 iyo A7 sida cusbooneysiinta waxa ugu horeeyay inkasta oo qaab yar oo wareegsan.
Marabtaa lacag ka jaban Nexus 5X? halkan waxaad ku haysaa qiimo dhan 40 euro
Haddii aad rabto inaad iibsato Nexus 5x raqiis ah ma seegi kartid dalabka Amazon ee kuu oggolaanaya inaad ku hesho Nexus 5X oo leh qiimo dhimis 40 euro ah
OUKITEL K6000 Pro, kani waa kan cusub ee 'OUKITEL phablet'
Oukitel K6000 Pro ayaa la soo bandhigay, taleefan u muuqda muuqaalkiisa cajiibka ah ee 6.000 mAh oo balan qaadaya ismaamul aan la mid ahayn
Waxay bedeleen agaasimihii qaybta taleefanka Samsung
Samsung waxay go'aansatay inay bedesho agaasimaha guud ee mas'uulka ka ah qaybta taleefanka ee Samsung kadib iibkii xumaa ee qaybtan
Samsung Galaxy View ayaa gaartay suuqa Isbaanishka
Samsung Galaxy View, kiniin Samsung ah oo leh 18.4 inji, ugu dambeyn wuxuu ku gaarayaa suuqa Isbaanishka qiimo run ahaantii macquul ah: 649 euro
Processor Samsung Exynos 8890 wuxuu baska saaraa dhamaan heerarka
Xogta AnTuTu ee ka socota processor-ka cusub ee Samsung, Samsung Exynos 8890, ayaa la soo daadiyey natiijaduna si fudud ayey u badatay: ku dhowaad 105.000
Swatch waxay heshiis la gashay Visa si ay u bilawdo smartwatch-keeda 2016: Swatch Bellamy
Swatch iyo Visa waxay saxiixeen heshiis lagu soo bandhigayo kii hore qeybta 'smarwatches' ee loo yaqaan 'Swatch Bellamy'.
Kuqor Xiaomi Redmi Xusuusin 3 hadda qiimaha ugu fiican
Xiaomi Redmi Note 3 cusub oo la filayo oo leh qeexitaanno farsamo oo heer sare ah oo qiime hoose dhexe ah ayaa hadda loo heli karaa boos celin.
Faahfaahinta iyo sawirka cusub ee Nokia C1 waa la sifeeyey
Nokia C1 wuxuu ku qaadanayaa midab aad iyo aad u badan sawirkaan cusub ee la sifeeyay iyo waxa noqon doona qeexitaankiisa ugu dambeeya.
Sharadka cusub ee LG waxaa lagu magacaabaa LG Zero waana taleefan casri ah oo shaashadiisu tahay 5 and iyo jir bir ah oo ku kacaya € 199
Naqshad wanaagsan oo loogu talagalay LG Zero cusub oo laga iibsan karo toddobaadka ugu horreeya ee Diseembar qiimaha € 199 ee bogga internetka.
Kani ma jiilka labaad ee Google Glass?
Muraayadaha Google Glass waxay umuuqataa inay kasoo laabatay dambaskeedii jiilka labaad ee keena qorshe kale qaab dhismeed aad ufiican oo ergonomic ah
Xiaomi Mi5 waxaa la soo bandhigi karaa Janaayo 2016
Calanka mustaqbalka ee soo saaraha Shiinaha, XIaomi Mi5, waa la soo bandhigi karaa bilowga sanadka soo socda ee 2016.
Sawir cusub oo muujinaya ayaa muujinaya soo celinta Nokia oo wata taleefan casri ah oo Android ah
Muuqaal sir ah ayaa muujinaya sida aan ula kulmi doonno soo noqoshada Nokia ee 2016 anagoo wata taleefanka gacanta ee casriga ah ee loo yaqaan 'Android smartphone', oo loo malaynayo dhamaadka 2016.
[BlackFriday] Soo iibso OnePlus 2 ama OnePlus X adiga oo aan lagugu martiqaadin
Imaatinka BlackFriday ee caanka ah, OnePlus wuxuu go'aansaday inuu furo iibsiga boosteejooyinkiisa isagoon casuumaad ka helin.
Galaxy A9 ayaa imaan kara bisha Diseembar
Xog daadis ah ayaa muujineysa in aaladda xigta ee nooca Kuuriya, Galaxy A9, la sii deyn karo bisha Diseembar.
Huawei Mate 8 ayaa hadda si rasmi ah u leh shaashadda 6-inji ah iyo qalabka cusub ee loo yaqaan 'Kirin 950 chip'
Qalabka cusub ee loo yaqaan 'Kirin 950 chip' ayaa noqon doona shaqada loogu talagalay Huawei Mate 8 cusub ee maanta ay soo saartay shirkadda Shiinaha ee Shanghai.
Dib u eegis ku sameynta Isbaanishka ee HOMTOM HT6, boosteejada leh awoodda batari ee ugu sarreysa suuqa
Maanta waxaan kuu soo bandhigeynaa dib-u-eegidgan dhammaystiran ee Isbaanishka ee HOMTOM HT6, moobaylka Android ee leh batteriga ugu weyn suuqa hadda jira.
LG wuxuu ku dhawaaqay LG Ray oo leh shaashad 5,5-inch ah wuxuuna diiradda saaray suuqyada 3G
Suuqyada 3G ayaa ah bartilmaameedka taleefankan oo leh astaamo macquul ah oo qiimahoodu yahay. Meesha ay ka muuqato waa kamaradda iyo jibiska.
Sharafta Ciyaarta 5X ayaa xaday
Terminal cusub oo sumcadda Sharafta leh ayaa dhowaan u muuqday mid xaday, waa Honor Play 5X.
Fossil Q Founder, Fosil's Android Wear hadda waa la heli karaa
Aasaasaha Fossil Q waa smartwatch-ka ugu horreeya oo leh "Android Wear" oo ka socda astaanta daawashada caanka ah ee Fosail.
Afka Micro SD wuxuu ku laaban doonaa Samsung Galaxy S7
Mid ka mid ah wararka xanta ah ee ka hadlay suurtagalnimada in Samsung Galaxy s7 uu lahaa taageero loogu talagalay boosaska micro SD ayaa la xaqiijiyay.
Sawirada saxaafadda iyo astaamaha farsamada ee Huawei Ascend Mate 8 waa la sifeeyey
Dhowr usbuuc ka hor ayaan idiinka warrannay dhacdo ay shirkadda Huawei u qorsheysay berri, 26-ka Noofambar. Soo saaraha Aasiya waxaa laga filaayey inuu soo bandhigo Huawei Ascend Mate cusub 8. Haddana sawirro taxane ah oo saxaafadeed ayaa la sii daayey, marka lagu daro astaamaha farsamo ee teerminaalka, isagoo xaqiijinaya in shirkadda weyn ee Shiinaha ay soo bandhigi doonto shay cusub.
Dhaxal sugaha Galaxy A7 wuxuu marayaa TENNA isagoo wata shaashad dhererkeedu yahay 5,5 inji 1080p iyo 3GB RAM ah
Dhaxal sugaha Galaxy A7 wuxuu istaagayaa TENNA wuxuuna noo soo bandhigayaa casriga oo leh shaashad 5,5-inji ah iyo 3GB RAM.
Vertu Aster Yosegi waa taleefan casri ah oo ka duwan oo gaar ah oo leh dhammayn qoryo
Waxaa lagu dhammeeyaa alwaax farshaxan dhaqameedkii Jabaan ee loo yaqaan 'Yosegi', Vertu Aster Yosegi waa taleefan casri ah oo aad u qaas ah.
Maanta waxaan kuu keenaynaa dib-u-eegidgan dhammaystiran ee Isbaanishka halkaasoo aan ku sharaxeyno wax walba iyo wax walba oo ku saabsan Xiaomi Mi Band 1s
Xiaomi waxay soo bandhigeysaa Redmi Note 3, oo ah taleefankeedii ugu horreeyay ee leh aaladda sawirka faraha
€ 132 waa qiimaha Xiaomi Redmi Note 3 cusub oo leh 5,5 "shaashadda FullHD, Mediatek octa-core chip iyo batari 4.000 mAh ah.
OnePlus X Ceramic Edition, daabacaadda xaddidan ayaa la sii dayn doonaa Nofeembar 24
OnePlus wuxuu soo saari doonaa qayb kooban oo ah terminalkeeda ugu yar, OnePlus X. Qalabkan ayaa la iibin doonaa Nofeembar 24.
Samsung W2016, Galaxy oo leh dabool
Samsung waxay ku dhawaaqday qalab cusub, waa Samsung W2016. Qalab dib noogu soo celiya xusuustii hore, sida daboolka si loo xiro shaashadda.
Huawei Mate 8, sidan ma noqon doontaa?
Terminal cusub oo loo yaqaan 'Huawei terminal' ayaa loo sifeeyey inuu yahay muuqaal muujinaya. Tani waxay noqon kartaa Huawei Mate 8 cusub waxayna arki kartaa iftiinka kahor dhamaadka sanadka.
Samsung waxay ku tuseysaa faahfaahinta tikniyoolajiyadda BRITECELL iyo Bio Processor
BRITECELL waa tikniyoolajiyadda ay Samsung soo bandhigtay si loogu daro kamaradaha soo socda ee cusub ee Galaxy-ka ah sanadka soo socda.
Sony waxay ku shaqeysaa SoC u gaar ah 2016
SoC ama chip ayaa ah waxa Sony ay ku shaqeyneyso hadda si ay ugu awoodaan inay ku daraan alaabooyinkooda ama uga iibiyaan kuwa kale ee wax soo saara.
Lenovo wuxuu dalka Shiinaha ka bilaabay khadka Vibe X3 oo leh awood maqal oo aad u weyn
Dalka Shiinaha waxay horeyba uga iibsan karaan seddex nooc oo Vibe X3 ah, sida heerka, Premium iyo Lite. Dhammaan seddexda waxay wadaagaan shaashad buuxda oo 5,5-inji ah.
Samsung Galaxy Note 5 "waxay ku hagaajineysaa" dhibaatada S Pen ee warqad ku dheggan (kaftan la'aan)
Dhibaatada dhaawaca Samsung Galaxy Note 5 terminal iyadoo si qaldan loo gelinayo S Pen ayaa sii socota, laakiin hada shirkadu waxay uga digeysaa warqad gaar ah.
Sawirada ugu horreeya iyo qiimaha Vkworld Discovery S2 waa la sifeeyey, oo ah Android leh teknolojiyad 3D ah oo aan muraayad lahayn
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa si gaar ah sawirradii ugu horreeyay iyo qiimaha Vkworld Discovery S2, Terminal cusub oo Shiineys ah oo leh teknolojiyad 3D ah oo aan muraayad lahayn.
Xiaomi wuxuu ku dhawaaqi doonaa Redmi Note 2 Pro bisha Nofeembar 24
Soo saaraha Shiinaha Xiaomi, wuxuu ku dhawaaqi doonaa terminalkiisa xiga bisha Noofambar 24, Xiaomi Redmi Note 2 Pro.
Galaxy A5 iyo A7 cusub ayaa la sifeeyey
Sawirro ayaa laga dusiyay muuqaalka muuqaalka aaladaha cusub ee Samsung, Galaxy A5 iyo Galaxy A7.
[APK] Xiriirka kamaradda cusub ee loogu talagalay qoyska Xperia Z5 hadda waa la heli karaa
Xperia Z5 ayaa cusbooneysiin kara laga bilaabo maanta barnaamijka kamaradda cusub ee nooca 2.0.0 oo keenaya is-dhexgalka cusub iyo isbeddelada kale ee yar yar.
Samsung waxay iibineysaa warshaddeeda LCD-da si ay diiradda u saarto tikniyoolajiyadda OLED
Samsung waxay iibineysaa warshaddeeda shaashadda LCD si ay diiradda u saarto tikniyoolajiyadda AMOLED.
Qeexitaannada HTC One X9 ayaa soo ifbaxaya
Waad ku mahadsantahay daadinta TENAA, waxaan ognahay qaar ka mid ah tilmaamaha ugu muhiimsan ee mustaqbalkiisa, HTC ONE X9.
HTC One A9 wuxuu ku kici doonaa 699 gudaha Spain, maahan kaftan dhadhan xun
HTC ayaa mar kale cagta ka toogtay ka dib markii ay ku dhawaaqday qiimaha HTC One A9: 699 euro. Qiimo jaban oo taleefanka dhexdhexaadka ah
Xiaomi Redmi Note 2 Pro waxay mareysaa TENNA
Xiaomi Redmi Note 2 Pro ayaa hadda soo martay TENNA, oo ah hay'adda shahaadada ee Shiinaha, iyadoo xaqiijinaysa astaamaheeda farsamo
Tilmaamo badan oo ku saabsan Xiaomi Mi5
Calaamadaha mustaqbalka ee soo saaraha Shiinaha, Xiaomi Mi5, ayaa ka tagay tijaabada waxqabadka ee codsi caan ah, kaas oo na siinaya tilmaamo badan oo ku saabsan.
Dib u eegista iyo falanqaynta ZUK Z1
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa falanqeyn dhameystiran oo ku saabsan qaabka caalamiga ah ee ZUK Z1.
BlackBerry Vienna waa BB-ka labaad ee casriga ah ee casriga ah oo wata naqshad dhaqameed
BlackBerry Vienna waa sharad labaad ee shirkadan Canadian-ka ah ee ku jirta Android laakiin leh taleefan casri ah oo taariikhi ah oo la mid ah kii caadiga ahaa.
Huawei Watch ayaa laga heli karaa Google Store
Mid ka mid ah saacadaha casriga ah ee ugu quruxda badan, Huawei Watch, ayaa hadda laga iibsan karaa Spain.
HTC One X9, kani waa taleefoon sare oo cusub oo soo saaruhu diyaariyo
Boorar la xaday ayaa muujinaya nashqadda HTC One X9, taleefanka cusub ee HTC-ka cusub.
Waxaan falanqeyneynaa mobilada midka ugu da'da weyn guriga: Haier E-ZY Smartphone A6
Waayeelka guriga ama qoyska ayaa ah waxa awood u yeelan doona inay si buuxda uga faa'iideystaan ​​taleefankan casriga ah ee E-ZY A6 ee Haier oo aan falanqeynay.
Oulkitel A29: Soo hel smartwatch-ka leh SIM-ka oo ah $ 70 oo horay loogu dalbaday
Oultikel waa smartwatch qiimo jaban oo maanta suuqa u galaya $ 70 iyo gaar ahaan lahaanshaha barta SIM-ga ah. Ma guuleysan doontaa? Waxaan kuu sheegeynaa ...
Qof kastaa wuu dhaafi karaa ilaalinta wershadda ee casriga casriga ah ee Samsung
Isticmaalahu wuxuu dhaafey ilaalinta wershada ee aaladda Samsung daqiiqado gudahood.
TAG Heuer Connected, ayaa ah daawashada ugu horeysa ee Switzerland oo leh Android Wear
Soo saaraha Switzerland wuxuu soo bandhigay smartwatch-ka uu wato 'Android Wear', ee TAG Heuer ku xiran.
Meizu Pro 5 Mini, tani waxay noqon doontaa loolanka adag ee Xperia Z5 Compact
Meizu Pro 5 Mini wuxuu si cad ugu jiheysan yahay suuqa caalamiga ah isla markaana farsamo ahaan wuu sii xoogaysanayaa.
Isku dheelitir la’aanta fiidiyowga kamaradda Xperia Z5 marka la barbar dhigo iPhone 6s Plus iyo Galaxy S6
Isbarbardhigyo dhowr ah oo ka dhan ah iPhone 6S Plus iyo Galaxy S6, isafgaradka Xperia Z5 wuxuu ku soo baxayaa guuleystaha cad in kastoo ay ka dhib badan tahay Samsung
Bluboo Uwatch wuxuu noqon karaa saacadda ugu horreysa ee qiimo jaban ee Android Wear, oo ka yar $ 50
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa sawirradii ugu horreeyay ee Bluboo Uwatch, oo noqon kara kii ugu horreeyay ee loo yaqaan 'Android Wear smartwatch' oo ka yar 50 euro.
Qaar ka mid ah dadka isticmaala Nexus 6P waxay ka cawdaan muraayad gadaal ka jaban
Qaar ka mid ah milkiilayaasha Nexus 6P ayaa ka warbixinaya cabashooyinka ay sabab u tahay muraayadda gadaal ka jaban oo qarinaysa kamaradda dambe.
Nexus 6P hadda waxaa laga heli karaa Spain
Nexus 6P ayaa ah terminaalka ugu weyn ee Google, hadda waa la heli karaa si loo iibsado.
Chronos wuxuu rabaa inuu saacad kasta u rogo saacadda casriga ah
Chronos wuxuu kuu oggolaanayaa inaad saacaddaadii hore u rogto mid leh shaqooyin caqli badan si aad u hesho ogeysiisyo iyo wax ka sii badan.
Diisambar 3 waxay noqon kartaa maalinta weyn ee Xiaomi Mi 5
Haddii Qualcomm uu soo bandhigo qalabkiisa cusub ee Snapdragon 820 bisha Noofambar 20, Diseembar 3 wuxuu noqon karaa midka loogu talagalay soo bandhigida Xiaomi Mi 5 cusub.
Falanqaynta Doogee F5, oo ah mid xasaasi ah oo loo yaqaan 'Android Phablet' oo ah qiimo lagu qosli karo
Falanqeyntan waxaan ku tuseynaa wax kasta oo Doogee F5 na siinayo, waa muuqaal xasaasi ah oo ah 'Android Phablet' oo ah qiimo lagu qosli karo.
Falanqaynta UMI Emax Mini, dib u eegista Isbaanishka
Maanta waxaan falanqeyneynaa UMI EMax Mini, oo ah Lollipop Android ah oo leh qeexitaanno dhexdhexaadka ah ee Android loogu talagalay kaliya 130 euro
Miyuu Samsung Galaxy S7 ku kici doonaa 10% wax ka yar calanka hore?
Samsung ayaa ka fikireysa inay yareyso qiimaha Samsung Galaxy S7 10% marka la barbardhigo soo bandhigyadii hore si ay suuqa ugu gaarto € 600
The Korean LG G4 wuxuu bilaabayaa inuu helo Android 6.0
LG G4-yada Kuuriyaanka ah ayaa durbaba bilaabay inay helaan cusbooneysiinta Android 6.0 M, oo ah nuuca ugu dambeeyay ee nidaamka qalliinka Google
ZTE Spro 2, ZTE's mini-projector-ka ugu dambeeya wuxuu yimid Spain
Intii lagu guda jiray daabacaadii ugu dambeysay ee MWC ZTE ayaa naga yaabisay iyadoo la soo bandhigayo qalabkiisa ugu horreeya ee mini-galaha ah ee wata Android Ugu dambeyntiina ZTE Spro 2 ayaa timaada Spain.
Rufus Cuff waa dharka xiran ee kuu keenaya casriga gacanta
Rufus Cuff waa weara la xiran karo oo leh karaamada ugu weyn ee ah inuu yahay "phablet of watches smart" maxaa yeelay waxay umuuqataa mid mobilada ka badan saacadda.
Casriga casriga casriga ah ee loo yaqaan 'Puzzlephone modular modular' ayaa yimaada Indiegogo
Puzzlephone ayaa aaday Indiegogo si ay u hesho lacag ku filan oo ay ku awoodo inay ku qaybiso moobiilkan Sebtember 2016.
LG G3 Flex wuxuu imaan doonaa Maarso 2016
Qalab cusub oo ka mid ah nooca Kuuriya, LG G3 Flex, ayaa imaan doona sanadka soo socda laakiin waxaan horey u ogaanay qeexitaankiisa.
Nexus 5X horeyba waa loogu iibiyay Spain wuxuuna la yimid Chromecast gacantiisa
Waxaan horey u sii haysan karnaa Nexus 5X iyada oo loo marayo Google Play waxayna ku siinayaan iibsashada Nexus 5X, cusub ee ChromeCast, hadiyad runtii xiiso leh.
Samsung waxay wadahadal kula jirtaa Sony si ay u keento dareeraha kaamerada Z5 ee cusub ee Galaxy S7
Dareemka IMX300 ee Sony Xperia Z5 ayaa hubaal noqon doona aaladda dareeraha kamaradda ee uu adeegsan doono Samsung Galaxy S7 cusub oo imaan doonta bisha Janaayo 2016.
Nexus 6P sidoo kale wuxuu labalaabaa # bendgatenexus6p
Bendgate wuxuu ku soo laabtay wadankeena. Ereygan ayaa caan ku noqday iPhone 6 iyadoo ay ugu wacan tahay fududaantiisa foorarka, hadda wuxuu ku noqonayaa Nexus 6P
Aluminium dhabarka New Redmi Note 2 Pro ayaa u muuqda
Xiaomi waxay gacanta ku haysaa qalab cusub oo dhexdhexaad ah oo Android ah, Xiaomi Redmi Note 2, kaas oo ku imaan doona jirka aluminium.
Tijaabi LG G2 VS Oneplus VS Mi4c: Trio of aces ayaa soo food saartay
Trio of aces ayaa wajahay tijaabadan xawaaraha ah Androidsis LG G2 VS Oneplus VS Mi4c
Nexus 6P waa aalad aad u adag in la dayactiro sida ay qabaan iFixit
Kooxda iFixit waxay kala furfureen Nexus 6P gabagabadooduna aad bay u cad yihiin: waa cadaab dhab ah in la dayactiro Huawei Nexus 6P
OnePlus X horeyba ayuu rasmi ugu ahaa heerka dhexe ee ugu fiican
OnePlus wuxuu imaan doonaa Nofeembar 5 oo leh nidaam casuumaad ah oo socon doona bisha ugu horreysa ka dibna waxaad ka iibsan kartaa shabakadda
Samsung waxay soo bandhigeysaa kororkeedii ugu horreeyay muddo labo sano ah
Waa markii ugu horreysay labadii sano ee la soo dhaafay ee Samsung ay macaash sameysay, taasoo muujineysa soo kabashada suurtagalka ah ee soo saarahaan Kuuriya.
Dhammaan qeexitaannada OnePlus X waa la sifeeyaa maalin kadib soo-bandhiggeeda
Ilaa hadda waxaan ogaanay kaliya qiimaha rasmiga ah ee Shiinaha, 240 euro in la beddelo, taas oo ay ugu wacan tahay boodhadhka xaday. Hada taxane cusub oo boodhadh ah ayaa na tusaya dhamaan astaamaha farsamo ee taleefoonka cusub ee OnePlus X. Oo maya, layaabi mayno.
Waxaan tijaabinay kaamirada wanaagsan ee Nexus 5X
Waxaan ku haysannay Nexus 5X gacmaheena si aan u hubino tayada ay muraayadaha indhaha ku qaawiyaan iyo sida barnaamijku u dhaqmo isla waqtigaas.
Nexus 5X waa la keydin karaa laga bilaabo Nofeembar 2 si uu u bilaabo rarka Nofeembar 9, toddobaad uun.
Ma haysaa saacad lagu xidho 'Android Wear'? Hadday sidaas tahay, InstaWeather for Android Wear ayaa ku siineysa adiga Maqaarka ugu Fiican ee loo yaqaan 'Wear Android'.
Imtixaanka xawaaraha Androidsis: LG G2 VS Oneplus 2
Tijaabada xawaaraha cusub ee Androidsis ee aan ku wajaheyno LG G2 VS Oneplus 2. Ayaa ku guuleysan doona dagaalka?
Dooxada 'Project', oo ah magaca loo yaqaan 'Samsung' taleefanka shaashadda isku laaban ee ugu horreeya
Samsung waxaa laga yaabaa inay ku shaqeyneyso taleefan cusub oo magaciisa loo yaqaan Project V ama Project Valley. Sirtaada? wuxuu yeelan doonaa shaashad isku laaban
Jiilka 2-aad ee Galaxy A3 wuxuu la muuqdaa Exynos 7580 oo ku jira kursiga keydka
Jiilka labaad ee mustaqbalka ee Samsung Galaxy A3, ayaa qaadi kara processor-ka Exynos 7580, sida ku cad jaangooyadii ugu dambeysay ee lagu daabacay iyaga.
LeTV wuxuu ku dhawaaqayaa Le 1s, mobiil raqiis ah oo leh bir bir ah iyo qalab aad u fiican
LeTV Le 1s waa terminal leh jir bir ah oo leh qalab aad u fiican kuna yimaado qiimo aad u jaban oo waxkasta oo ay bixiso ah.
Imtixaanka xawaaraha Androidsis: LG G2 VS Xiaomi Mi4c
Imtixaanka xawaaraha cusub ee Androidsis ee aan ku wajahno LG G2 VS Xiaomi Mi4c. Yaa ku guuleysan doona dagaalka?
Imtixaanka xawaaraha Androidsis: Oneplus 2 VS Xiaomi Mi4c
Maanta waxaan wajaheynaa Oneplus 2 VS Xiaomi Mi4c si aan u aragno haddii uu jiro farqi noocan oo kale ah oo u dhexeeya isticmaalka maalinlaha ah ee labada istish-haadiyo ee Android oo ay ku kala duwan yihiin farqi weyn oo xagga qiimaha ah, in kasta oo aysan ku jirin qeexitaanno farsamo.
Qiimaha HTC One A9 wuxuu ku kordhayaa 100 doolar markii la bilaabay November 7
$ 100 waa kororka qiimaha HTC One A9 cusub oo garaaci doona khaanadaha bisha Nofeembar 7 Maraykanka.
Fairphone 2 ayaa hadda la heli karaa, taleefanka gacanta ee ugu fudud ee Android lagu dayactiro
FairPhone 2 waa taleefan qaabaysan laakiin si cad ayaa loogu kala duwan yahay iyadoo loo oggolaanayo dadka isticmaala inay ka saaraan qaybaha cilladaysan oo ay sidaas si fudud ugu dayactiraan.
Beddel Xiaomi Launcher talaabo talaabo ah
Ku badalida Launcher-kaaga Xiaomi waxay u noqon kartaa ikhtiyaar ama howl aan macquul aheyn dadka isticmaala qaarkood, gaar ahaan kuwa ku cusub MIUI, waana sababta aan kuu bari doono sida loo badalo Xiaomi Launcher talaabo talaabo
Casuumadaha OnePlus 2 waxay hadda dhacayaan 3 maalmood
Ilaa hada, casuumaadaha lagu iibsanayo OnePlus 2 waxay dhacayeen 24 saac kadib. Hadda soo saaraha Shiinaha wuxuu go'aansaday inay dhacayaan 3 maalmood.
Sony waxay si rasmi ah u beenisay inay ka baxeyso adduunka mobilada
In kasta oo xantaasi aysan sameynin wax ka badan buuxinta daboolida, Sony waxay si rasmi ah u beenisay inay ka baxayso dunida taleefannada gacanta, iyadoo caddeynaysa inay diiradda saari doonto hagaajinta.
iFixit wuxuu kala daadiyaa Nexus 5X, oo ah qalab aad u fudud in la dayactiro
Waxaan horey kuugu soo bandhignay qaar ka mid ah shaqooyinka iFixit, websaydhada ku takhasusay kala daadinta taleefannada casriga ah. Hadda ragga waa inay shaqeeyaan oo ay si buuxda u fureen Nexus 5X natiijaduna waxay ahayd mid aad u wanaagsan.
Xiaomi Mi4c, dib u eegista Isbaanishka
Maanta waxaan si fiican u falanqeyneynaa xarigga cusub ee Xiaomi ee ku yaal bushimaha qof walba. Terminaalku waa mid kale oo aan ahayn Xiaomi Mi4c, oo ah terminal xamaasad leh oo Android ah qiimo lagu qosli karo.
Galaxy S7 wuxuu yeelan doonaa nooc Plus ah
Mustaqbalka xiddigga mustaqbalka ee Samsung, Galaxy S7, wuxuu yeelan doonaa nooc Plus ah sida jiilka hadda jira.
Samsung Galaxy On5 iyo Galaxy On7 ayaa hadda rasmi uga ah Shiinaha
Galaxy On5 iyo Galaxy On7 ayaa horey looga sii daayay Shiinaha waxayna gaari doonaan qiimo aad u wanaagsan oo bixinaya qalab isku dhafan oo loogu talagalay dhamaadka-dhamaadka.
[Video] Xiaomi Mi4c tijaabada iska caabinta
Waxaan kuu soo bandhigeynaa fiidiyowga aan ku aragno tijaabada iska caabinta Xiaomi Mi4 oo leh jirdil kaas oo xaruntan xiaomi ee xasaasiga ah ay ku socoto si loo hubiyo loona caddeeyo tayadeeda.
Huawei waa soo saaraha ugu iibinta badan Shiinaha
Sida laga soo xigtay xogtii ugu dambeysay ee la daabacay, Huawei waa shirkadda ugu iibinta badan taleefannada Shiinaha. Dabcan, waxaan ka hadleynaa iibka, ma ahan faa iidooyin.
Madaxweynaha Xiaomi wuxuu muujinayaa astaamo muujinaya inuu soo galay suuqa Mareykanka
Ka dib barashada sida Huawei hadda u yahay iibiyaha ugu fiican Shiinaha, Xiaomi wuxuu ka fikirayaa wax badan oo ku saabsan bartilmaameedka suuqa Mareykanka
Tani waa Nexus 5X gudaha
iFixit wuxuu gaarsiiyay aaladda cusub ee Google, Nexus 5X, isagoo awood u leh inuu arko waxa gudaha ka jira.
Huawei hadda waa iibiyaha ugu weyn ee casriga ee Shiinaha
Shiinaha hadda waa waddan wanaagsan oo lagu cabbiro xaaladda dhowr ka mid ah soo-saarayaasha ugu muhiimsan sida Huawei, oo ku guuleystey rubucii ugu dambeeyay.
Samsung waxay diyaarineysaa Galaxy On5 iyo On7 inay dib ugu laabato caaggii oo ay ahaato sidii ay ahaan jirtay
Galaxy ON5 iyo Galaxy ON7 waxaa laga soosaaraa dalka India waxaana la soo bandhigi doonaa todobaadyada soo socda iyagoo ah labo terminal qiimo jaban.
XWatch, Bluboo's Android Wear, sawirada dhabta ah
XWatch wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyay ee smartwatch ee laga helo soo saaraha Shiinaha ee Bluboo. Tan ugu xiisaha badan ayaa ah inay xambaari doonto Android Wear.
Fosil waxay ku dhawaaqeysaa Aasaasaheeda Q Wearable ee leh Android Wear
Android Wear waa nooca software-ka ee Fossil Q Founder-ka cusub, mid ka mid ah afarta smartwatches ee ay ku dhawaaqday astaantan casriga ah.
Maanta waxaan soo bandhigeynaa seddex fiidiyow oo casharro ah oo aad ku awood u yeelan karto inaad ku fiicnaato Xiaomi Mi4c ugu badnaan. Halkan waxaad ka heli doontaa sida loo xidido Xiaomi Mi4c, sida loo rakibo TWRP Recovery iyo sida gabi ahaanba loogu dhigo Isbaanish.
MIUI 7 wuxuu imaan doonaa OTA Oktoobar 27
Nooca xiga ee nidaamka hawlgalka ee Xiaomi oo ku saleysan Android, MIUI 7, wuxuu imaan doonaa Oktoobar 27 iyada oo loo marayo OTA.
Huawei wuxuu soo bandhigi doonaa calan cusub kahor dhamaadka sanadka
Shirkadda Huawei ayaa soo kordheysa. Soo saaraha Aasiya wuxuu noqday mid ka mid ah halyeeyada aan muran ka jirin ee ...
Elephone waxay ka fureysaa Spain adeeg dayactir ah
Elephone waxay furi doontaa dhowr adeeg oo dayactir ah, midkoodna wuxuu ka furayaa Tarragona si macaamiisha Elephone ee Isbaanishku ugu awoodaan inay halkaas ku hagaajiyaan taleefankooda.
HTC One A9 hadda waa rasmi: 5 screen shaashadda AMOLED, 2 / 3GB oo RAM ah iyo Snapdragon 617 chip
HTC ayaa hadda ku dhawaaqday mid cusub oo loo yaqaan 'A A9' taas oo la imaanaysa hal ku dhigga ah inuu yahay mid ka mid ah soosaarayaasha Taiwan ee khamaarista ugu sarreysa leh kirismaska ​​oo kaliya u jira dhagax tuur
Samsung waxay diyaar u tahay inay sii diyaariso imaatinka Galaxy S7 bisha Janaayo
Samsung ayaa qorsheyneysa inay soo saarto Galaxy S7 bisha Janaayo si ay ula tartanto taleefannada cusub shirkadda tooska ula tartameysa ee Apple.
HTC waxay kuxirantahay xoog, xarunteeda xigta waxba kama haysaan iPhone-ka
Madaxweynaha hada ee HTC wuxuu sameeyay hadalo aad uqurux badan oo ku saabsan terminaalka xiga ee taageerayaasha shirkadan.
Tijaabada xawaaraha ee udhaxeysa OnePlus One iyo OnePlus Two, runti ma u qalantaa farqiga?
Waxaan kuu keenaynaa tijaabo xawaare dhammaystiran oo udhaxeysa OnePlus One iyo OnePlus Two halkaasoo aan ku tusayno kala duwanaanshaha waxqabadka labada taleefan
Oppo R7s ayaa lagu shaaciyey 4GB RAM iyo shaashad 5,5 ″ AMOLED ah
Oppo R7s, oo ah taleefan casri ah oo jidh bir ah leh, 5,5 "shaashadda AMOLED iyo 4GB oo RAM ah, ayaa loo soo bandhigay imaatinkiisa Yurub bishii Diseembar.
InWatch Run, Alibaba's smart watch
Rafaaladda Shiinaha, Alibaba, ayaa soo bandhigtay waxa ay noqon doonto smartwatch-keedii ugu horreeyay, inWatch Run.
Samsung Galaxy S7 ayaa la imaan doonta USB Type-C isku xiraha
Sida laga soo xigtay Sammobile, Samsung Galaxy S7 ee soo socota waxay yeelan doontaa isku xiraha Nooca C ee USB ah oo lagu daro nidaam lacag-bixin deg deg ah ku shaqeeya.
Kuwani waxay noqon doonaan aaladaha Sony ee aadaya Android 6.0 iyagoon marin Lollipop 5.1
Waxaan kuu keenaynaa liistada qalabka Sony Xperia ee lagu cusbooneysiin doono Android 6.0 Marshmallow iyada oo aan loo marin Android 5.1.
Tilmaamaha OnePlus X ayaa gabi ahaanba xaday
Qeexitaannada terminalka ugu yar ee soo saaraha Shiinaha, OnePlus X, ayaa horay loo yaqaan.
Meizu M3 Note wuxuu noqon doonaa bir
Terminalka xiga ee xiga ee soosaaraha Shiinaha ee bartamaha-dhexe, Meizu M3 Note, wuxuu lahaan doonaa dhameystir wanaagsan, wuxuu yeelan doonaa jir bir ah iyo warar dheeri ah.
Waa kuwee terminaalyaasha Android kuwa ugu ammaansan? Dhig khamaaristaada!
Hanjabaadaha aaladaha Android ayaa sii kordhaya, laakiin qaarkood waxay bixiyaan iska caabin ka badan kuwa kale. Marabtaa inaad ogaato meelaha ugu amaanka badan Android?
DULMIGA ama waxa u noqon lahaa Mashruuca Ara ee saacadaha casriga ah
BLOCKS waa madal la socota isbeddellada ay bixiso Mashruuca Ara, laakiin halkan oo leh saacado casri ah oo casri ah
LG wuxuu bilaabi doonaa inuu soo saaro Android 6.0 Marshmallow usbuuca soo socda G4
LG wuxuu bilaabi doonaa inuu soo saaro Android 6.0 Marshmallow LG G4 usbuuca soo socda Poland, waxaana ku xigi doona gobolada intiisa kale.
OnePlus wuxuu ku siinayaa OnePlus 2 oo lagu beddelo sumadda Samsung
OnePlus waxay leedahay hindise cusub oo soo jiidaneysa isticmaaleyaasha, iyadoo la siinayo OnePlus 2 iyadoo lagu beddelayo Samsung. Marabtaa inaad waxbadan ka ogaato dalacsiintan?
Wax kasta oo diyaar u ah soo bandhigida OnePlus X Oktoobar 29
OnePlus horeyba wuxuu u haystaa wax walba oo diyaar u ah inuu ku soo bandhigo taleefankiisa cusub ee OnePlus X bisha Oktoobar 29, taas oo lagu sifayn doono muuqaal muuqaal ah oo aad u fiican.
HTC waxay diyaarineysaa 'isbeddelka xiga ee midka' Oktoobar 20
HTC One A9 waa mobilo leh astaamo dhex dhexaad ah oo lagu soo bandhigi doono 20ka Oktoobar magaalada New York isla markaana Tidal u noqon doonta adeeg geyn ah.
Xannibaadaha, smartwatch qaybsan oo raadinaya maalgelin
Saacadaha qaybsan ayaa iman kara mustaqbalka caddaynta tanina waa aragtida sida ay haddaba u jiraan mashaariic sida Blocks ah.
Meizu Smartwatch ayaa la soo bandhigi karaa bisha soo socota ee Oktoobar 21
Meizu smartwatch waa la dusiyay waxaana la soo bandhigi karaa Oktoobar 21.
TAG Heuer waxay wadaageysaa sawir teaser ah smarwatch-kooda Kuxiran iyo taariikhda ay soo bandhigayaan
TAG Heuer Connected waa smartwatch kii ugu horeeyey ee ka yimaada soosaaraha saacadaha Switzerland kaas oo la soo bandhigi doono Nofeembar 9.
Xiaomi waxay diyaarineysaa dhacdo bisha Oktoobar 19 ee soo socota, Xiaomi Mi5?
Xiaomi wuxuu soo bandhigi karaa terminalkeeda xiga ee xiddig, Xiaomi Mi5, Oktoobar 19.
Elephone Ele Watch, Shiinaha ayaa ku daawaneysa Android Wear 115 doolar
Elephone Ele Watch ayaa noqon doonta smartwatch-ka ugu horeeya ee rakhiis ah ee wata 'Android Wear'.
OnePlus X, ayaa xaday sawirro
Qalabka xiga ee soo saaraha Shiinaha waa OnePlus X. Waxbadan ayaan ka maqalnay qalabkan hadana waxaan aragnaa sawirradii uguhoreeyay ee xaday.
3 fure oo lagu doorto mobilada ugu fiican ee shaqeyn kara
Ma waxaad raadineysaa taleefan aad isticmaali doontid gaar ahaan shaqada? Maanta waxaan ku sharraxeynaa sifooyinka muhiim u ah mobilada shaqada.
OnePlus 2 lama casuumin maanta saacad
OnePlus 2 waa mid ka mid ah aaladaha sababaya xanaaqa ugu badan sanadkan. Hadal badan ayaa jiray ...
OnePlus wuxuu diyaariyaa dhacdo Oktoobar 12, OnePlus X?
OnePlus waxay leedahay dhacdo loo diyaariyey bisha soo socota ee Oktoobar 12. Munaasabaddan, soosaaraha Shiinaha wuxuu soo bandhigi karaa xarunteeda cusub, OnePlus X.
Qiimaha Xiaomi Mi5 wuxuu noqon karaa ilaa 300 euro
Qiimaha Xiaomi Mi5 iyo calanka mustaqbalka ee soo saaraha Shiinaha, wuxuu noqon karaa ilaa 300 euro.
Xwatch: smartwatch-ka isboorti ee Bluboo oo wata nidaamka hawlgalka Android Wear
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa qaadashada gaarka ah ee gaarka u ah sawirradii ugu horreeyay ee la sifeeyay ee Bluboo Xwatch, smartwatch-kii ugu horreeyay ee isboorti ee Bluboo leh in ka badan qeexitaanno farsamo oo xiiso leh.
Sony way tixgelin kartaa iibinta qaybteeda taleefanka haddii iibku uusan horumarin
Ugu dambeyntiina, Sony waxay tixgelinaysaa iibinta qaybteeda mobilada haddii tirooyinka iibku aysan hagaagsanayn kahor dhammaadka sannad-maaliyadeedka